Ugu yaraan 45 qof oo ku dhimatay weerar isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 45 qof oo ku dhimatay weerar isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS
In ka badan 6,600 qof ayaa lagu dilay weeraro isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2015. Sawirka: Reuters.
Cadan-(Puntland Mirror) Qarax isbiimayn ah oo lala beegsaday saldhig ciidamada lagu tababaro oo kuyaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Yemen ee Cadan ayaa lagu dilay ugu yaraan 45 qof, sida ay sheegeen ilo-wareed caafimaad.
Saraakiisha amaanka ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in qofka weerarka soo qaaday uu gaarigiisa oo qarax ka buuxo uu gudaha u gashay meel la isugu yimid oo ciidamo cusub lagu qorayay oo kutaala waqooyiga magaalada Cadan maanta oo Isniin ah.
Gelinkii dambe ee maanta ayaa masuuliyada weerarkaas, waxaa sheegatay kooxda ISIS ee ka dagaalanta Bariga Dhexe.
Dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa la geeyay saddex isbitaal, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Magaalo xeebeedka Cadan, ayaa waxay saldhig kumeel gaar ah u tahay dowlada Yemen oo ay wadamada Gacanka Carabta dabada ka riixayaan, magaalada ayaa waxaa ka dhacay weeraro qaraxyo ah iyo dilal lala bartilmaameedsanayo saraakiisha dowlada.
Kooxo kala duwan oo ay kamidyihiin Xuutiyiinta ay taageerto Iran, dowlada Yemen oo ay wadamada Gacanka Carabta dabada ka riixayaan iyo ururka Al-Qaacida ayaa ku dagaalamaya gudaha dalka Yemen afartii sanno ee u dambeeyay.
In ka badan 6,600 qof ayaa lagu dilay weeraro isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2015.
November 27, 2016 Ciidamada dowladda Suuriya oo dib ula wareegay degmada Aleppo